Forex Mt4 Maareeyaha Kormeeraha ee Multi, Xisaabaadka Ganacsi ee Kala Duwan FXCC
Home / Ajandooyinka / PC / Multi Account Manager
Ganacsatada xirfadlayaasha leh xisaabaad badan iyo maareyn hantida waxay ubaahan yihiin qalab u sameeya maareynta xisaabo badan oo sahlan oo ammaan ah.
Halkan FXCC waxaan ku faannaa inaan xalino dhibaatooyinka ka hor intaanay kicin. Taasi waa sababta aan u soo bandhigno ganacsatada xisaabaadka badan iyo maareeyayaasha lacagta MetaFx MAM (Maareeyaha Multi Account) ee software. MAM wuxuu leeyahay faa'iidooyin faa'iido leh oo ka dhaxeeya heerarka kale ee la midka ah sida MetaTrader Multi Terminal tusaale ahaan.
Codsiga FXCC MAM wuxuu ku habboon yahay:
Ganacsatada Xirfadlayaasha ah ama Maamulayaasha Lacagta kuwaas oo ubaahan in ay MT4 kala xisaabtamaan tiro badan isla xisaabtan
Ganacsatada u baahan in ay eegaan xaaladda xisaabta iyo taariikhda xisaabaadka badan
Ganacsatada samaynta xirfad kooxeed iyagoo ka wakiil ah xisaabo badan
Nidaamkeena macaamiisha Xisaabtanka ah ayaa taageera:
Hirgelinta degdega ah, kantarooleeye xakamaynta & cusbooneysiinta server-yada cusub oo loo marayo macaamiisha dhinaca farsamada
Farsamooyinka - Koontooyinka caadiga ah iyo Mini Lot ee faa'iidada ugu fiican
Xiritaan qayb ahaan ah oo amarro ah oo lagu fulinayo macaamiisha xisaabta
Daaqadda suuqa ee suuqa MAM
MAM wuxuu bixiyaa fursado aad u jilicsan oo loogu talagalay qoondeynta ganacsiga:
Lot Qoondaynta: Qalabka waxaa loo xilsaaray xisaab kasta
Qeybinta Qoondaynta: Boqolleyda miisaanka guud ee ganacsiga ee xisaabta miisaaniyadda waxaa loo xilsaaray si kasta oo koonto ah.
Isku-dheelitirnaanta Balance: Muujinta Awoodda oo si toos ah u xisaabisay boqolkiiba miisaanka koontada koontada ee xisaabta miisaaniyadda, iyo marka la sameeyo sidaas miisaaman miisaanka lagu qaado xisaabta miisaanka ee dhammaan xisaabaadka firfircoon.
Isku-dheelitirnaanta Sinaanta: Nooca Awooda oo si otomaatig ah u xisaabiya boqolkiiba sinnaanta koonto kasta ee koontada macaamiisha, iyo marka la sameeyo sidaas miisaaman miisaanka lagu qaado xisaabta miisaanka ee dhammaan xisaabaadka firfircoon.
Qiyaasta Boqolleyda: Muuqaalkan, Maamulaha Xisaabtu wuxuu qeexayaa%% sinnaanta loo isticmaali karo ganacsi kasta, halka X% ee sinnaanta loo isticmaalo gelitaanka kasta.
Qalabixin Xisaabin ah Unlimited
Qiimaha Ganacsiga Kadib
Xisaabaadka Cusub ee Cusub
Mid ka mid ah sifooyinka ugu caansan ee MT4 waa kartida si toos ah uga ganacsiga jaantusyada. Taasi waxay ku socotaa software-ka MAM, sidaa darteed hadda waxaad ka iibsan kartaa koontooyin badan oo leh shaxda ganacsiga ganacsiga.
Maareeyaha Macaamilka FXCC ee Multi Account wuxuu ku yaallaa tiknoolajiyada kobcinta tiknoolajiyada si uu ula socdo xisaab furan Liistada liiska waa mid cajiib ah waxaanay hagaajin doontaa maamulka macaamiisha xisaabaadka badan ee Forex.
Fadlan ogow: Barnaamijka MAM waa codsi saddexaad. Arimaha farsamada ama taageerada waa in lagu hagaajiyaa MetaFX.